Trump oo lagu mudaharaaday xili uu booqanayey magaalooyinkii ay Weerarada ka dhaceen • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Trump oo lagu mudaharaaday xili uu booqanayey magaalooyinkii ay Weerarada ka dhaceen
Trump oo lagu mudaharaaday xili uu booqanayey magaalooyinkii ay Weerarada ka dhaceen
August 8, 2019 - By: Hanad Askar
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa booqasho ku tagay labadii magaalo ay maalmo kahor ka dhaceen weeraro ay ku dhinteen in ka badan 30 qof.
Trump ayaa booqashadiisa magaalooyinka El-Paso (gobalka Texas) iyo Dayton (Gobalka Ohio) ahayd mid ay si weyn uga soo horjeedaan in badan oo kamid ah shacabka ku dhaqan magaalooyinkaasi oo ku eedeeyey Madaxweynaha Maraykanka inuu sabab u yahay falalka cunsuriyiinta Maraykanka ku kacayaan ee sare usii kacayey tan iyo intuu xilka qabtay.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa tagay Isbitaalada ku yaal labada magaalo ee lagu hayo dadkii ku dhaawacmay weeraradaas, xili ay halkaasi ku mudaharaadayeen shacab kasoo horjeeda imaanshihiisa dhulkaasi.
Shacabka Maraykanka ayaa dhinaca kale ku eedeenaya xisbi xaakimka Jamhuuriga ah inuu yahay kan weli hortaagan in isbedal lagu sameeyo sharcuuda u fasaxeysa shacabka inay hubka fudud heystaan, arrintaasi oo la xariirta maalgelinta iyo hantida badan oo ay siyaasiyiinta xisbigaasi ka helaan ururka u ololeeya shirkadaha hubka soo saara ee loo yaqaan NRA.
Golaha Senate (Aqalka Sare) ee Maraykanka ayaa hada waxa horyaal sharci cusub oo ay ansixiyeen Aqalka Hoose oo ay maamulaan Xisbiga Dimuquraadiga, sharcigaasi oo lagu xakameenayo dadka hubka loo sharciyeeyo inay marka hore maraan baaritaan heer Federaal ah oo lagu eegayo in qofkaasi khatar ku yahay amniga dalka, sharcigaasi oo ay hada hortaagan yihiin xisbiga Jamhuuriga oo heysta aqlabiyada Golaha Sare ee Senate-ka.